Noocyada logos: noocyada kala duwan ee logos ee ka kooban naqshadeynta | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 23/04/2022 13:06 | Design Graphic, General
Calaamaduhu waa walxo garaafyo ah oo u adeegay in ay meel dhigaan shirkad gaar ah suuqa, calaamaduhu waa mid kasta oo ka mid ah walxahan mid mid ayaa u taagan meel gaar ah waxayna noqon kartaa siyaabo kala duwan.
Laakiin qoraalkan, uma aan iman oo kaliya in aan ka hadalno waxyaabahan. laakiin halkii, mid kasta oo ka mid ah noocyada logos ee jira. Haddi aad had iyo jeer la yaabban tahay waxa ay calaamaddu ka samaysan tahay, ama waxa lagu garto, waxaanu si faahfaahsan kuugu sharxi doonaa hoos.
Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ku tusi doonaa qaar ka mid ah calaamadaha ugu wanaagsan ee taariikhda galay.
1 Logos: waa maxay?
1.1.1 Maxay u yihiin
1.1.3 Taariikhda Soomaaliya
1.1.4 Ku meel gaadhka iyo shaqaynta
2.1 calaamado ama calaamado
3 Tusaalooyinka calaamadaha
3.4 Logo (Burger King)
Logos: waa maxay?
Logotype, waxaa lagu qeexaa sida nooc ka mid ah naqshadaynta qoraalka. Waa qayb ka mid ah naqshadaynta garaafyada, gaar ahaan naqshadaynta aqoonsiga ama sidoo kale loo yaqaan calaamadaynta. Qaybta suuq-geynta dhijitaalka ah ayaa sidoo kale aad loo yaqaan. Inta badan waxaa lagu gartaa in la sameeyay ama la nashqadeeyay iyadoo lagu salaynayo canaasirta garaafyada kuwaas oo, sida caadiga ah, ay yihiin far ama walxo kale oo caan ah.
Waxa kale oo inta badan lagu go'aamiyaa magac-bixin, taas oo ah, magac-bixintu waxay dhalinaysaa magaca shirkadda ama hay'adda gaarka ah ee loo qaabeeyey astaanta, iyo waxay ku siin doontaa matalaad ugu badan marka la eego qiyamkaaga iyo sawirkaaga shirkad ahaan.
Logos waa hab degdeg ah oo lagu gudbiyo sawir gaar ah ku saabsan waxa loogu talagalay in lagu matalo ama lagu muujiyo shirkad gaar ah. Si kale haddii loo dhigo, waa habka ugu habboon ee lagu sharxi karo dhinacyo ay ka mid yihiin: wax soo saarka shirkadda, qiyamka ugu muhiimsan, habka ay calaamaddu u wada xiriirto, taas oo ah, codka isgaarsiinta ee la adeegsan doono, ugu weyn. ujeeddooyinka ama ujeedooyinka maamulayaasha shirkadda iwm.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo calaamado ah oo aan hoos ku arki doonno, mid kasta oo ka mid ah noocyadaas waxaa lagu gartaa in si kale loo soo bandhigo, sidaas darteed. waxaa jira noocyo aad u kala duwan oo kala duwan kuwaas oo galay in taariikhda lagu tilmaamo kuwa ugu guulaha badan suuqa.
Waxa ay dad yar ka yaqaaniin logos waa in muddo dheer ka hor inta aysan calaamad noqon, waxay ahaayeen shaabadood. waxaa jiray waqti go'an oo qaybaha garaafyada ee ay hadda ka kooban yihiin aysan jirin, wax walba waxaa lagu sawiray gacanta, sidaas darteed suurtagal ma ahayn in la helo calaamad si qumman u muuqata ama shaqeynaysa. Sababtan awgeed, farshaxanno badan ama naqshadeeyayaasha ayaa bilaabay inay ku sawiraan qaabka sawir-gacmeedka ilaa ay ka helaan farshaxanka ugu dambeeya.. Laakiin waxay ahaayeen nooc ka mid ah shaabadihii.
Ku meel gaadhka iyo shaqaynta
Ugu dambeyntii, waa in la ogaadaa in calaamadaha la naqshadeeyay oo dib loo habeeyay, taas oo ah, noocyo badan ayaa doorta inay dib u habeyn ku sameeyaan calaamad gaar ah sababtoo ah waqti ka dib, waxay joojisay shaqeynta, ama sababtoo ah badeecada ayaa sidoo kale horumarisay oo isbeddelay, ama sababtoo ah sawirka waxay u taagan tahay macaamiishaada ama dadweynahaagu kuma filna. Haddaba, Waxaa ka mid ah sifooyinka aasaasiga ah ee calaamaduhu ay tahay inay lahaadaan waa in ay raacdo wakhtiga ama ku meel gaadhka oo ay tahay in ay sii shaqeyso.
calaamado ama calaamado
Astaanta ama astaanta waxa lagu gartaa inay yihiin erayo gaagaaban oo taxana ah oo aan ka badnayn saddex eray oo qoran, isla markaana ah kuwo si buuxda u xasuusan kara shacabka loo sameeyay.
Sababtan awgeed, logos ayaa laga sameeyay xarfo kala duwan. Maxaa ugu cadcad oo loo soo bandhigo sida ugu caansan, waa sababta oo ah qoraallada qoraalka ah, maadaama ay noqon karto mid kala duwan oo badan oo wakiil ah, ayaa ka sii fiican.
Waxaa jira noocyo badan oo sharad ku yaal calaamad kaliya si ay u bixiyaan dhammaan wajigooda ugu fiican.
isotype waxaa lagu gartaa inuu yahay nooc ka mid ah calaamad ama matalaad halkaas oo qaar ka mid ah dhinacyada ugu badan ee astaanta lagu muujiyo. Si kale haddii loo dhigo, haddii aan u naqshadeyneyno dukaanka isboortiga, waxaan soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah walxaha leh jimicsi badan, dabeecad laxan iyo dheelitirnaan gaar ah.
Tani waa waxa ugu badan ee u taagan isotypes, kuwaas oo had iyo jeer lagu dhejiyo walxaha garaafka, taas oo siinaya matalaad wanaagsan oo calaamad ah. Intaa waxaa dheer, dhinacyo kale sida midabka shirkadda ama cabbirada u dhexeeya curiyaha iyo curiyaha ayaa sidoo kale ku lug leh.
imagotype waxaa lagu qeexaa inuu yahay midowga saxda ah ee ka dhexeeya summada iyo isqoridka. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waa in lagu soo bandhigaa qaab muuqaal ah oo bixiya dheelitirnaan muuqaal ah oo qumman. Kordhinta, magacyo badan ayaa ku sharmaaya nashqada noocan oo kale ah, taas oo ah sababta ay u sii jeceshahay naqshad muuqaal ah oo wanaagsan, si fiican loo habeeyey oo dheellitiran.
Sababtan awgeed, sawirada sida caadiga ah waxaa lagu xoojiyaa qoraal wanaagsan iyo halabuur garaaf oo wanaagsan mid kasta oo ka mid ah curiyeyaasha aynu naqaanno ayaa samaysmay. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale lagu sharciyeeyay midowga calaamadaha in ay jiraan tiro badan oo noocyada naqshadeynta ah ee suuqa.
Isologos waa midowga u dhexeeya sumadda iyo isotype laakiin markan, waxay ka kooban tahay laba qaybood oo si fiican loo qaybiyay. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad go'aansato inaad kala saarto mid ka mid ah qaybahan, naqshaddu waxay joojinaysaa inay shaqeyso. Taas oo macnaheedu yahay in dib loo habeeyo naqshaddan. Sidaa darteed shay kasta oo nashqaddiisa soo dhexgala waxa laga dhigay ujeeddo ama hawl., wax si kedis ah looma sameeyo mar haddii ay jirto sabab ka dambaysa oo ka muuqata soo jeedintaada. Intaa waxaa dheer, waa inay ahaadaan kuwo isku dheelitiran si, ka dib, isticmaalka, si sax ah loo isticmaalo.
Marka la soo koobo, waxaa jira dhowr naqshadood oo calaamad ah oo jira. Sida aynu hore u soo sheegnay, mid kasta oo ka mid ah noocyadan waxaa lagu gartaa in ay buuxiso hawlo gebi ahaanba ka duwan midba midka kale. Muhiimadu waa in aad barato oo aad taqaano mid kasta waxa uu yahay, si aad hadhow u ogaato nooca nashqada ugu fiican ee ku haboon ama lagu dabaqi karo naqshada astaantaada.
Marka xigta, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah naqshadaha astaanta ugu fiican. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa ay ka kooban tahay nooc kala duwan, si aad si faahfaahsan ugu fiirsato curiyayaasha iyo hawlaheeda.
Xigasho: Wallpapers Best
Nooca caanka ah ee cabitaannada cusboonaysiinta ayaa doortay waxa aan u naqaanno calaamad ahaan, taas oo ah, naqshad ka bilaabma kaliya naqshadaynta qoraalka. Sidaa darteed, waxay ahayd in ay soo baxaan oo ay nolosha siiyaan astaanta iyaga oo isticmaalaya qoraal sifo ah. Mid ka mid ah oo bixiya firfircooni iyo dhaqdhaqaaq gaar ah oo calaamaddu u qalanto, iyada oo loo marayo qaabkan iyo gaar ahaan, naqshadeeda, waxay ku guuleysteen inay siiyaan astaanta xoogga iyo tamarta ay u qalmaan. Intaa waxaa dheer, midabkeeda dabka ayaa kor u qaadaya dhinacyadan xitaa, taas oo maanta ku guulaysatay inay ku jirto maskaxda dhammaan macaamiisheeda.
Mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee u taagan naqshadeynta noocan oo kale ah ayaa shaki la'aan ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dharka isboortiga taariikhda, Nike. Shirkaddu waxay go'aansatay in ay doorato naqshad fudud, naqshad ka dhex muuqda noocyada kale oo laga aqoonsan karo inta kale. Muddo dheer ka hor astaanta caanka ah ee Nike ee calaamadda iyo qoraalkeeda, calaamaddu waxay dooratay naqshad aad u yar oo fudud, halkaas oo uu isticmaalay oo kaliya curiyaha aan maanta naqaano, tick madow ee caanka ah.
Xigasho: Ganacsiga Suuqgeynta
Amazon, oo hadda ah shirkadda ugu weyn e-package, waxay dooratay naqshad calaamad ah oo ku salaysan imagotype. Summadahooda waxaynu ku arki karnaa sida ay u doorteen qoraal-qoraal ah oo lagu sifayn lahaa summada iyo shirkadda labadaba. Intaa waxaa dheer, waxay ku dartay dheeri ah, plus this waxaa lagu go'aamiyaa element graphic in u dhaqmo sida icon ah, dhoola. Dhoola cadeyntu waxay u taagan tahay ballaca calaamadda oo dhan waxayna sidoo kale muujineysaa mid kasta oo ka mid ah dhinacyada ugu togan iyo kuwa ugu cusub ee shirkaddu u leedahay macaamiisheeda. Shaki la'aan, calaamad loogu talagalay inay bixiso dabeecadda lagama maarmaanka ah ee shirkadda.
Logo (Burger King)
Oo si loo dhammeeyo liiskan yar ee tusaalooyinka, waxaan ku tusineynaa tusaalaha Burger King, silsiladda cuntada degdega ah ee caanka ah ee adduunka oo dhan, waxaan isticmaalaa naqshad, jaleecada hore, waxay bixisaa dhammaan dheelitirnaanta iyo firfircoonida alaabtu ka tarjumayso maskaxda. ee macaamiishooda. Midab muuqda oo soo jiidasho leh oo aan la dareemin iyo qoraal gaar ah oo bixiya dhammaan dabeecad firfircoon oo farxad leh. Naqshad qumman oo isku dhafan farxad iyo wada noolaansho ka mid ah kuwa isticmaala maalin kasta. Marka la soo koobo, naqshad qumman, oo loogu talagalay badeeco dhadhan fiican leh.
Noocyo badan oo magacyo ah ayaa la noolaa inta badan taariikhdooda oo leh nashqado u muuqda kuwo shaqeynaya oo si fiican loogu talagalay inay ku tartamaan suuqa. Marka aynu ka hadlayno logos, kama hadlayno far gaar ah oo si fiican loo dhejiyay oo la matalay, laakiin dhammaan qaybaha walxaha, kuwaas oo u taagan qaab dheellitiran, samaynta naqshad wanaagsan.
Taasi waa sababta, waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay aduunka calaamadaha. Adduun ballaaran oo ay ka buuxaan canaasiir naga dhigaya adduun ay ka buuxaan fursado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Noocyada astaamaha